Mayotte Tourism dia manolotra ny hetsika Vanilla Islands
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mayotte Tourism dia manolotra ny hetsika Vanilla Islands
Jolay 21, 2018
Ny Nosy Vanilla dia nosy enina ao amin'ny Ranomasimbe Indiana izay nanapa-kevitra ny handray andraikitra hampandroso ny fizahantany.
Na dia ivon'ny tsenan'ny sambo fitsangantsanganana aza ny ankamaroan'ny asa dia zava-dehibe hatrany ny fijerena manokana ny lazan'ireo nosy. Arakaraka ny ahafantaran'ny nosy tsara kokoa sy betsaka kokoa ny isan'ny mpizahatany no hitombo.
Noho izany, ny nosy tsirairay avy dia namorona hetsika iray izay anasany ireo mpiara-miombon'antoka aminy, mba hiasa ho toy izany paikady mitaona izany.
Taorian'ny Fetiben'ny Seychelles, ny Fetiben'ny Fizahan-tany any Madagascar, ny Fetiben'ny Kreol any Maorisy, ny Fetin'ny Fahafahana Métis ao amin'ny Nosy La Réunion ary ny Fetin'ny Lova sy ny Kolontsaina Komoro dia feno tanteraka amin'ny Mayotte Lagoon Festival ny tsingerina.
Notokanana ny zoma 19 Jolay io avy amin'ny Prefet sy ny filohan'ny filankevitry ny departemanta, Soibahadine IBRAHIM RAMADANI, izay filohan'ny Nosy Vanilla ihany koa, ity festival ity dia manasongadina ny lagoon.
Ny tanjon'ity hetsika ity dia ny hampiroborobo an'i Mayotte, ny harena ara-kolontsaina sy ny harena voajanahary ary ao anatin'ny tetikasa hahazoana ny lagoon voatanisa ho toy ny vakoky UNESCO World Heritage.
Raha ny filazan'i Pascal VIROLEAU, talen'ny Nosy Vanilla dia “ny festival dia fotoana iray hizarana sy hahitana manodidina ny lohahevitry ny ranomasina. Izy io dia fananana fizahan-tany lehibe ho an'i Mayotte izay tsy maintsy ampiasaina hanamafisana ny lazan'ilay nosy ”.
Raha ny filazan'i Soibahadine IBRAHIM RAMADANI dia: "Nanaiky tanteraka ny tetikasan'ny Nosy Vanilla i Mayotte. Mandroso tanteraka amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy fizahantany izy ”.
'Fanitsakitsahana fiarovana lehibe': sidina manidina manakaiky ny Emirates A380
Mamonjy ny Nosy Big Hawaii miaraka amina fizahan-tany lava